Chii chinonzi Litecoin uye sei kutenga kutenga Litecoin? Zvese nezve LTC | Gadget nhau
Chii chinonzi Litecoin uye sei kutenga Litecoin?
Litecoin inongedzo-kune-poindi yedhijitari mari (P2P) iyo yakavakirwa pasoftware yakavhurika uye iyo yakarova musika mu2011 semubatsiri weBitcoin. Zvishoma nezvishoma iri kuve isingazivikanwe mari yemadhora inoshandiswa nevazhinji vashandisi, kunyanya nekuda kwekureruka kunogona kuita rudzi urwu rwemari, yakaderera zvakanyanya kupfuura iyo yeBitcoin.
Kunyangwe tikataura nezvazvo digital mari kana cryptocurrencies Ipapo Bitcoins inouya mupfungwa. Asi haisiriyo yega inowanikwa mumusika, kure nazvo, kwemakore mashoma, Ethereum rave rakakomba imwe nzira kune BitcoinKunyangwe kana tikazvisimbisa pachedu pakukosha kweimwe yeiyi mari, kuchine nzira refu yekuenda kuti ive imwe nzira chaiyo yeBitcoin, mari yakava nzira yekubhadhara mune mamwe emakambani makuru akadai seMicrosoft, Steam , Expedia, Dell, PayPal kutumidza mashoma mienzaniso.
Unoda here invest in Litecoin? Zvakanaka tora $ 10 YEMAHARA muLitecoin nekudzvanya apa
Muchikamu chino tiri kuzokuratidza zvese zvaunoda kuti uzive nezveLitecoin, zvazviri, mashandiro ayo uye kupi kwekuitenga.
1 Chii chinonzi Litecoin
2 Musiyano uripo pakati peLitecoin neBitcoin
3 Ndiani akasika Litecoin
4 Ini ndinowana sei Litecoins
5 Zvakanakira nekuipira kweLitecoin
6 Maitiro ekutenga Litecoins
Chii chinonzi Litecoin
Litecoin, senge mamwe madhijitari edhijitari, ndeye isingazivikanwe mari yemadhora yakasikwa muna2011 senge imwe nzira yeBitcoin, yakavakirwa padandemutande reP2P, saka hapana nguva inodzorwa nechero chiremera, sekunge zvichiitika nemari yepamutemo yenyika dzese, saka kukosha kwayo kunosiyana zvichienderana nezvinodiwa. Kusazivikanwa kwemari iyi kunotendera viga chitupa nguva dzese yevanhu vanoita mutengano, sezvo uchiitwa kuburikidza nechikwama chemagetsi uko mari yedu yese inochengetwa. Dambudziko rerudzi urwu rwemari rakafanana nenguva dzose, nekuti kana vakatibira, hatina nzira yekuziva kuti ndiani adurura chikwama chedu.
Iyo blockchain, inonyatso kuzivikanwa se blockchain, yeLitecoin inokwanisa kubata yakakwira vhoriyamu yekutengesa kupfuura Bitcoin. Nekuti kugadzirwa kwemabhureki kunowanzoitika, netiweki inotsigira kutengeserana kwakawanda pasina kukosha kwekugadzirisa software nekuenderera mberi kana munguva pfupi iri kutevera. Saka, vatengesi vanowana kukurumidza kusimbisa nguva, kuchengetedza vane kugona kumirira kumwe kusimbiswa pavanotengesa zvinhu zvinodhura.
Musiyano uripo pakati peLitecoin neBitcoin
Kuva chinobva kana forogo yeBitcoin, ese ma cryptocurrencies anoshandisa imwecheteyo sisitimu yekushandisa uye musiyano mukuru unowanikwa mu huwandu hwekuburitswa kwemamirioni emari, iri munyaya yeBitcoin pamamiriyoni makumi maviri nerimwe, nepo muganhu weLitecoins ndeye mamirioni makumi masere nemana, 4 zvakapetwa. Mimwe misiyano inowanikwa mukufarirwa kwemari mbiri idzi, nepo Bitcoin ichizivikanwa zvakanyanya, Litecoin zvishoma nezvishoma kugadzira dent mumusika uyu wemari chaiyo.
Tora $ 10 YEMAHARA muLitecoin nekudzvanya pano
Mumwe mutsauko unowanikwa kana zvasvika pakuwana chaiyo mari. Ipo Bitcoin mugodhi uchishandisa SH-256 algorithm, iyo inoda yakanyanya processor processor kushandiswa, iyo yekuchera Litecoin inoshanda kuburikidza ne scrypt inoda huwandu hwakawanda hwendangariro, ichisiya parutivi processor.
Ndiani akasika Litecoin
Mumwe aimbove mushandi weGoogle, Charlie Lee, ndiye ari kumashure kwekugadzirwa kwaLitecoin, zvichipiwa kushomeka kwemamwe maitiketi pamusika wemari chaiyo uye pavaive vasati vava mari yakajairika yemhando ipi neipi yemari. Charlie aive akavakirwa paBitcoin asi aine chinangwa che chinja mari iyi kuti ive nzira yekubhadhara yakagadzikana uye haina kutsamira zvakanyanyisa padzimba dzekuchinjana, chimwe chinhu icho sekukwanisa kwatakaita kuongorora hazviitike neBitcoin.
Saka kuti mari iyi haina kukanganiswa nekufungidzira, nzira yekuiwana iri nyore uye yakaenzana, kuitira kuti pavanogadzirwa, maitiro acho haana kuomarara kana kudzikisa huwandu hwemari inowanikwa. Bitcoin yakagadzirirwa kubata kusvika kumamiriyoni makumi maviri emari emari, nepo muLitecoin mune makumi masere nemana emari.
Ini ndinowana sei Litecoins
Litecoin forogo yeBitcoin, saka software ye tanga kuchera Bitcoins zvakangofanana neyakagadziriswa diki. Sezvandambotaura pamusoro, mubairo wekuchera maLitecoins unobatsira kupfuura Bitcoin. Parizvino kune yega yega bhuroka tinogamuchira makumi maviri neshanu maLitecoins, iyo mari inoderedzwa nehafu makore ese mana angangoita, yakaderera zvakadzama pane yatinoona kana tikazvipira kumigodhi Bitcoins.
Litecoin, semamwe ese madhijitari, yakavhurwa sosi software chirongwa chakaburitswa pasi peMIT / X11 rezinesi iyo inotibvumidza kumhanya, kugadzirisa, kuteedzera software uye kuigovera. Iyo software inosunungurwa mune yakajeka nzira inobvumidza yakazvimirira ongororo yemabhanari uye yavo inoenderana sosi kodhi. Iyo inodikanwa software yekutanga kwemigodhi Litecoins inogona kuwanikwa mu Litecoin yepamutemo peji, uye inowanikwa yeWindows, Mac, uye Linux. Isu tinogona zvakare kuwana iyo sosi kodhi
Iko kushanda kwechishandiso hakuna chakavanzika, nekuti isu tinongofanirwa kudaro dhawunirodha chirongwa uye chinotanga kungoita basa racho, pasina isu kupindira chero nguva. Iko kunyorera iko pachako kunotipa mukana kune chikwama uko kwese maLitecoins atiri kuwana ari kuchengetwa uye kubva kwatinogona kutumira kana kugamuchira idzi mari dzemhando yepamusoro pamwe nekutarisa kune ese mashandisiro atakaita kusvika parizvino.
Imwe nzira yekuchera maLitecoins pasina kuisa mari mukombuta, tinoiwana iri Scheriton, makore emigodhi system Izvo zvatinogonawo kuchera maBitcoins neEthereum. Scheriton inotibvumidza kuti tiise huwandu hweGHz iyo yatinoda kuendesa kumigodhi, kuitira kuti tikwanise kutenga simba rakawanda kuti tiwane maLitecoins edu kana imwe mari chaiyo nekukurumidza.
Zvakanakira nekuipira kweLitecoin
Zvakanakira izvo Litecoin anotipa zvakangofanana izvo zvatinogona kuwana nedzimwe mari dzese, dzakadai sekuchengeteka uye kusazivikanwa kana uchiita chero mhando yekutengesa, kusavapo kwemakomisheni kubvira kutengesa kunoitwa kubva kumushandisi kuenda kumushandisi pasina kupindira kwechero rinodzora muviri uye nekumhanyisa, kubvira kuchinjiswa kwerudzi urwu rwemari nekukasira.
Dambudziko guru rakatarisana nemari iyi nhasi nderekuti harizivikanwe sezvingaite Bitcoin nhasi, mari inozivikanwa neanenge munhu wese. Neraki, nekuda kwekuzivikanwa kwemari iyi, dzimwe nzira dzese dzinowanikwa mumusika dziri kuramba dzichishandiswa nevashandisi, kunyangwe parizvino vasiri padanho reBitcoin, mari iyo mamwe makambani makuru akatotanga. kushandisa senzira yekubhadhara.
Maitiro ekutenga Litecoins
Kana isu tisingadi kutanga kuchera maLitecoins, asi isu tichida kupinda munyika yemari isingazivikanwe mari, tinogona kusarudza tenga litecoins kuburikidza neCoinbase, iro rakanakisa sevhisi parizvino inotibvumidza kuita chero mhando yekutengeserana nerudzi urwu rwemari. Coinbase inotipa isu kunyorera kubvunza account yedu chero nguva yeese iOS neApple, iko kunyorera kunotipa ruzivo rwakadzama nezve zvingangoitika kuchinja kuri kutambura nemari.
Iwe unoda kuisa mari muLitecoin?
Dzvanya HERE kutenga Litecoin
Kuti tikwanise kutenga ino chaiyo mari, isu tinofanirwa kutanga tawedzera kiredhiti kadhi kana kuzviita kuburikidza neakaundi bhangi.
Usapotsa yako $ 10 YEMAHARA muBitcoin nekudzvanya apa!
Coinbase: Exchange BTC, ETH, SHIBvakasununguka
Mukugadziri: Coinbase Android
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Technology » Cryptocurrencies » Chii chinonzi Litecoin uye sei kutenga Litecoin?
Izvi ndizvo zvinoita Meizu M6, yakanaka, yakanaka uye yakachipa foni